पाठक प्रतिक्रिया - ४ - Safal Stories
Home Reader's Blog पाठक प्रतिक्रिया – ४
मलाई यो पेजले कतिसम्म सकारात्मक परिवर्तन गर्न सफल भएको छ त्यो त मापन गर्न सकिदैन ।
म सुत्न लाग्दा र बिहान उठ्ने बित्तिकै safal stories मा के पोष्ट भएको छ, हेर्छु । मलाई चिन्ता, तनाव, भय भएको अबस्थामा मैले यो पेजबाट मेरो मोबाइलमा save गरेर राखेको प्रेरक कुराहरु हेर्छु र जस्ले ममा आत्मविश्वास जागेर अाउँछ।
ममा रेडियो कार्यक्रम साथीसँग मनका कुरा र यो सफल स्टोरिजले धेरै सकारात्मक परिवर्तन अाएको छ, जुन मापन गर्न सकिदैन!!!
– अशोक बुद्ध लामा
मनमा खुशी र हिम्मत आउँछ सफल स्टोरिज पढेपछि ……
धन्यवाद सफल स्टोरिज टिम !
– सन्तोषी अर्याल
Previousव्यवसायी विनोद चौधरीका सफलताका सुत्र
Nextचौध सयवटा प्रकाशकबाट अस्वीकृत भएपछि मिलेको सफलता